'गुरुङका कानुन व्यवसायीलाई १० देखि १५ मिनेटभन्दा बढी समय दिन सकिन्‍न'- प्रधानन्यायाधीश- समाचार - कान्तिपुर समाचार
'तपाईंको निवेदनभन्दा पछाडि फेरि ५ वटा निवेदन छ, हामीले के गर्ने ? हाम्रा अप्रिय शब्दलाई पनि प्रिय मानिदिनुस् है'
काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा भइरहेको बहस लामो भएको भन्दै समय निर्धारण गरेका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठकोतर्फबाट वकालत गर्न आएका कानुन व्यवसायीहरूलाई १० देखि १५ मिनेटभन्दा बढी समय दिन नसकिने प्रधानन्यायाधीश जबराले बताएका हुन् ।
तीन दिनयता गुरुङको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा पनि नसकिएपछि प्रधानन्यायाधीशले थप लामो समय दिन नसकिने बताएका हुन् । तीन दिनमा गुरुङको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा ६ जना कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस गरेका छन् । इजलासले भने लामो समय लगाउँदा आफूमाथि मुद्दा लम्ब्याएको भनेर बाहिर चर्चा हुने लागेको भन्दै लामो समय दिन नसकिने बताएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबार भने, 'ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भनेझैं हुन्छ । त्यो तपाईंहरू आफैंले महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो । त्यसैले हामीहरूले समय चाहिँ तपपाईंहरूले जतिसुकै भनेपनि १० मिनेट देखि १५ मिनेटभन्दा बढी देव गुरुङको तर्फबाट दिन्नौं है । त्यो भन्दा बढ्ता तपाईंहरूले हठ पनि नगर्नुहोस् । यो त सम्भवै हुन्न ।'
गरुङभन्दा पछि पनि ५ वटा रिट निवेदन रहेको र उनीहरूलाई पनि समय दिनैपर्ने भएकाले मुद्दा लम्बिने जबराले बताए । 'तपाईंको निवेदनभन्दा पछाडि फेरि ५ वटा निवेदन छ, हामीले के गर्ने ? हाम्रा अप्रिय शब्दलाई पनि प्रिय मानिदिनुस् है,' उनले भने । इजलासले कानुन व्यवसायीहरूलाई बहस नोट दर्ता गराएर छोटो बहस गर्नका लागि आग्रह गरेको हो ।
गुरुङलगायतका निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले भने शुक्रबारसम्म समय दिन आग्रह गरेका छन् । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता सबैलाई १० देखि १५ मिनेट मात्रै समय दिन सकिने बताए । 'हामीले दिएको समयमा नै तपाईंहरू सिध्याउनुहोस् है,' उनले भने ।
एउटै विषय दोहोरिने र एउटै कानुन व्यवसायीले घण्टौं बहस गर्न थालेपछि इजलासले समय निर्धारण गर्न लागेको हो । गुरुङभन्दा पहिलेका निवेदकका पक्षमा बहस गर्न आएका कानुन व्यवसायीहरूलाई भने इजलासले समय निर्धारण गरेको थियो । गुरुङकोतर्फबाट बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूका लागि भने इजलासले समय निर्धारण गरेको थिएन । जसका कारण तीन दिनमा ६ जनाले मात्रै बहस गरेका छन् ।
पछिल्लो तीन दिनमा गुरुङकातर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र महतो, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, युवराज संग्रौला र हरिहर दाहालले बहस गरेका छन् ।
विघटन सदर भए प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षको हुनेछ : वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौला
प्रकाशित : माघ १४, २०७७ १६:४८
सम्पत्तिका लागि आफन्तबाटै हत्या गरिएको प्रहरीको दाबी
माघ १४, २०७७ माधव ढुंगाना
भैरहवा — ९ दिनअघि जलेको अवस्थामा फेला परेको एकजना पुरुषको शवका बारेमा गरिएको अनुसन्धानबाट सम्पत्तिका लागि आफ्नै नातेदारबाट हत्या गरिएको रहस्य प्रहरीले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।
रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका-७ स्थित गरगट्टी भन्ने स्थानमा गत माघ ६ गते जलेर क्षत विक्षत भइ पहिचान हुन नसक्ने अवस्थामा फेला परेको पुरुषको शवको बारेमा रुपन्देही प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।
रुपन्देहीकै सियारी गाउँपालिका २ बस्ने ३४ वर्षीय राजेन्द्र यादवलाई आफ्नै काका र काकाको छोराहरु समेतको संलग्नतामा भाडामा मान्छे मार्ने हत्याराको प्रयोग गरी हत्या गरि जलाइएको दाबी प्रहरीको छ । ‘घटनास्थल आसपासमा फेला परेको मोटरसाइकलको पांग्राको बालुवामा जमेको डोब र रगत लागेको एउटा सानो पाइपबाट फेला परेको व्यक्तिको मृत्यु सामान्य नभइ हत्या भएको पुष्टि गरेको थियो,’ घटनाको बारेमा बुधबार सार्वजनिक गर्दै रुपन्देहीका एसपी प्रविण पोखरेलले भने, ‘शवको सनाखत हुनासाथ कारण पत्ता लगाउन सहज भयो ।’
शवको पहिचान हुन नसेको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दाले डेरामा बस्दै आएका राजेन्द्र यादव बेपत्ता भएको जानकारी प्रहरीलाई दिएका थिए । राजेन्द्रको हत्याबाट कसलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ ? भन्ने विषयबाट अनुसन्धान अघि बढाइएपछि हत्याको रहस्य खुलेको पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार राजेन्द्र २ वर्षको हुँदा उनका बाबु राम सुभगको सर्पले टोकेर मृत्यु भएको थियो । आमा गुलमतीले देवर (राजेन्द्रको काका) राम वेलास यादवसँग विवाह गरेपछि जोगेन्द्र, नरेश र वीरेन्द्र यादव छोरा जन्मेका थिए । राजेन्द्र
१४ वर्षसम्म भारतमा बसेर फर्केपछि अंश मागेका थिए । अंशका कारण आफू असुरक्षित ठानी नजिकै भाडामा बस्दै आएका थिए । अंश माग्दा नपाएपछि अदालतमा परेको अंश मुद्दामा रुपन्देही अदालतले १४ कट्ठा भन्दा धेरै पाउने गरी मिलापत्र गराइदिएको थियो । जुन करोडौं मूल्य पर्छ । यही सम्पत्ति हत्याउन राम बिलास सहितका आफन्तले अविवाहित राजेन्द्रको हत्याको योजना बनाएका थिए ।
प्रहरीले, रामबिलास, उनका तीनजना छोरा हत्यामा संलग्न अन्य गरी ५ जनालाई पक्राउ गरि अदालती कारबाही अघि बढाएको छ ।
प्रकाशित : माघ १४, २०७७ १६:३०